Chromecast 2: vahaolana bebe kokoa, fahombiazana ary vidiny mitovy | Androidsis
Chromecast 2, vahaolana avo lenta, fampisehoana tsara kokoa ary ny vidiny mitovy
alexis martinez | | Fitaovana hafa
Androany dia ho any San Francisco ny maso rehetra ary Google dia mitazona ny hetsika hataony anio hanolotra ireo fitaovana Nexus vaovao. Araka ny fantatrao tsara, terminal terminal Nexus roa no haseho voalohany, fa ny tsy ampoizina hafa koa mety hianjera ary ny iray amin'izy ireo dia mety ho ny Chromecast vaovao.
Nandritra ny ora vitsy lasa dia be ny tsaho momba ny fitaovan'ny Google streaming. Ary io dia, efa roa taona tamin'ny taranaka voalohany isika, izay fahombiazana io, ka mety mieritreritra ny hanavao sy hanatsara ny vokatra i Google. Niely eraky ny tambajotra ny tsaho rehefa loharanom-baovao akaiky ny motera fikarohana no nanome anarana ny fahitana Chromecast 2 mandritra ny kaonferansa anio.
Ity dongle HDMI vaovao ity dia hanana endrika novina raha oharina amin'ny kinova voalohany. Vao tsy ela akory izay dia ny sivana sary voalohany amin'ilay fitaovana no voasivana ary ankehitriny fantatsika ny antsipiriany hafa manan-danja momba azy io.
Amin'ny maha-zava-baovao antsika an'ity vokatra ity dia hitantsika fa izao dia ho hita amin'ny loko telo samy hafa ny gadget: mainty, mavo ary mena. Zava-baovao iray hafa an'io Chromecast 2 dia ny hananany vahaolana avo kokoa y tsaratsara kokoa noho ny taranaka voalohany, noho izany dia afaka miresaka momba ny iza isika mikoriana ao amin'ny 4K. Raha izany no izy dia farany, midika izany fa hanana ny mifanentana amin'ireo tambajotra Wi-Fi 5 GHz ary, mazava ho azy, hampiana chipset tsara kokoa, izay tsy fantatsika momba izany. Raha ny fantatsika dia ny vidiny, izay hitovy amin'ny an'ny taranaka voalohany, 35 euro. Amin'ny fahatongavan'ilay fitaovana vaovao dia antenaina fa havaozina ny rindranasa Android Chromecast izay manome azy fampiasa bebe kokoa rehefa mahita ny atiny miaraka amin'ireo rindranasa mifanaraka aminy, toa ny YouTube, Netflix, sns ... miaraka amin'ny dongle HDMI an'ny Google.
Ho fanampin'izany, misy fahagagana iray hafa koa mety hianjera amin'ny marika Chromecast ary izany dia ny vavahady 9to5Google, izay iray amin'ireo nanivana ny fitaovana fampidinana vaovao an'ny motera fikarohana, dia namoaka ihany koa fa hisy ny kinova Chromecast Audio. Izy io dia azo ampiasaina hampifandraisana azy amin'ny mpandahateny mahazatra rehetra, toy ny fahitalavitra, mpandahateny fiara sns ... Tokony ho hitantsika tokoa ny fomba fiasan'ity fitaovana Google vaovao ity satria mety hampatsiahy antsika kely Nexus-Q.
Araka ny fantatrao tsara, Google mankalaza ny fampisehoana azy amin'ny 18:00 ora Espaniola. Azo arahana amin'ny alàlan'ny fantsona YouTube azy io, fa manentana anao izahay hanaraka anay amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny bilaogy hahafantarana bebe kokoa momba izany. Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba an'io Chromecast vaovao io ?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Chromecast 2, vahaolana avo lenta, fampisehoana tsara kokoa ary ny vidiny mitovy